Caadooyinka Dukaamaysiga Mobilada ee Dunida oo dhan » Martech Zone
Caadooyinka Dukaamaysiga Mobilada ee Dunida oo dhan
Arbacada, Nofeembar 21, 2012 Adam Yar
U guuritaanka wax ka iibsiga khadka tooska ah ee aaladda moobaylka kuma koobna oo keliya, ee waa qarxaysaa. Haddii meheraddaada tafaariiqdu ay tahay khadka tooska ah laakiin aan moobiil ku shaqeynin, waxaad gebi ahaanba dhaawaceysaa iibkaaga adoo iska indhatiraya koox macaamiil ah oo hunguri weyn oo sii kordhaya. Maalgashiga xalka webka moobiillada iyo codsiyada moobaylka / kiniinku waa inay noqdaan kuwa ugu sarreeya liiskaaga mudnaanta haddii aadan horay u sameyn.
Dhaqaaji falanqeeyay waxqabadkii 2012 ee 200 milyan oo ka adeeganaya websaydhada ganacsiga mobilada waxaa ku shaqeeya Mobify Cloud si loo go'aamiyo ummada inta badan dukaamada ku socota. Falanqayntayada xogta, waxaan dooneynay inaan ogaano waxa ummaduhu ku hogaamiyaan jacaylka ay u hayaan alaabada Apple sida iphone, iPad iyo iPods.
Mobify Cloud awoodaha in ka badan 20,000 oo goobood iyo in ka badan $ 100-milyan oo dakhliga ganacsiga moobiilka, oo gaaraya 20% macaamiisha taleefannada casriga ah.
Tags: cirifdhaqaajinganacsiga gacantakombiyuutarka elektarooniga ahmarketing mobile
Noocyada iyo Suuqgeynta Mawduucyada: Ka taxaddar buunbuuninta
Panguin: Eeg Saamaynta Isbedelada Google Algorithm